Latest stories written by Set Kyar Wa Lar – Medium
Apr 23 ·3min
React Native + Codepush Setup
React Native ကို MS App Center CodePush နှင့်ဘယ်လို Setup လုပ်မလဲဆိုတာရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Documentation…
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ အသစ်တစ်ခုခုလေ့လာချင်တာ ကျွန်တာ့်စိတ်ကူးအိမ်မက်ပါ။ အမြဲတမ်းလည်းလေ့လာဖို့လုပ်ပါတယ်…
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဘယ်မှမသွားဘဲ အိမ်မှာဘဲနေရင်း course တွေလိုက်တက်မယ် စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဆိုပြီး နှစ်တိုင်းနီးပါးလုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်ပါဘဲ။…
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး click နှိပ်တဲ့သူတွေတော့ဂျင်းမိတာဘဲ 😂။ ဒီရက်ပိုင်းကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် (Company)…
Some part of the universe — Episode I
It’s all start after knowing the matriculation exam result. I think I got the total mark of 272 or 262 around. I don’t remember exactly.
Before that, let me get back to before knowing my matriculation exam result.
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကအတော်လေးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ ဥပမာ… မဖြစ်မနေထကိုထရမယ့်မနက်ခင်းထတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားထားရင် အချိန်ကျလာရင်အိပ်ပျော်နေတာတောင်အလိုလိုထလာတာမျိုးပေါ့။ အဲ့လိုဘဲအရေးမကြီးတာမျိုးဆိုရင် ကိုယ်မတော်တဆနိုးလာရင်တောင်အေးအေးဆေးဆေးပြန်မှေးအိပ်စက်သွားသလိုပါဘဲ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လက်မှတ်က sign မဟုတ်တဲ့ certificate လက်မှတ်ပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အဆင့်မြင့်လက်မှတ်ဆိုလို့ ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ် (တက်ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်) ဘဲရှိပါတယ်။ တက်ကသိုလ်က ကျွန်တော်တက်ခြင်တဲ့ ဘာသာရပ်မဟုတ်တဲ့ဘာသာယူထားသလိုဖြစ်သွားလို့ ဒုတိယနှစ်မှာဘဲတန့်သွားပါတယ်။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့အထိ…
စတာကတော့ Yoma marathon (half marathon) ပြေးမယ်ဆိုတာကစတာပါဘဲ။
အစပိုင်းတုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြေးရတာကြိုက်ပြီမှတ်တာ နောက်ပိုင်းတော့မပြေးဖြစ်ပါဘူး။ နေပူတာမိုးရွာတာကစတာပါဘဲ။ အခုတော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြေးဖြစ်တာကနေ Yoma marathon (21 km) ပြေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်။…
2017 Recap & 2018 wanna do?
In 2017, the following are my specials…
- I change my job. - I lived one month in another town that I don’t know anyone. - I cycling for over 50 miles inaday alone. - I get married. - I created my own side project and getalittle money from it. - I…